င ဝန် န ဒီ: November 2009
ကွယ်လွန်သည်မှာ ၁ လကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း နောက်ဆက်တွဲများကား ဝေဖန်ဆွေးနွေး စရာများ အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ပေသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:51 PM 1 comment:
ဆားတောင်သူများအတွက် ချေးငွေအစီအစဉ် ဖျက်သိမ်း
နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာခရိုင်အတွင်းရှိ ဆားတောင်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ချေးငွေ (၂) နှစ် အစီအစဉ်ကို စစ်အစိုးရက ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
ဆားတောင်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ချေးငွေအဖြစ် ဆားကွင်း တဧက ကျပ် (၃) သိန်း ချေးပေးသည့် အစီအစဉ်ကို (၂ ) နှစ် သက်တမ်း သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရက ချေးငွေကို တနှစ်အတွင်း အကျေပြန်တောင်းပြီး ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“အရင်နှစ်က နာဂစ်ဖြစ်လို့ ပေးတာ။ အခု မပေးတော့ဘူး။ ချေးငွေက ဆပ်ဖို့ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျန်သေးတယ်။ ဒီလူတွေကို အရေးယူတာတော့ မလုပ်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြန်ဆပ်ဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေက တောင်းနေပါတယ်” လပွတ္တာခရိုင်မှ ဆားလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
ချေးငွေအစီအစဉ် မရှိသည့်အတွက် ဆားတောင်သူများ ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး ယခု အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာတွင် စတင်ရမည့် ဆားလုပ်ငန်း မစတင်နိုင်သေးဘဲ လုပ်ငန်းရှင်အများစုမှာ အရင်းအနှီး ရှာဖွေနေရဆဲဖြစ်သည်။
“ငွေရှာရတာတော့ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းထုတ်ရောင်းရတာပါ။ ကျွဲ (၄) ကောင်ရှိရင် (၂) ကောင် ထုတ်ရောင်း။ အင်ဂျင် (၂) လုံးရှိရင်
(၁) လုံး ထုတ်ရောင်း။ ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေ ထုတ်ရောင်းပြီး နိုင်သလောက်လေးတွေ လုပ်နေကြတယ်” ဟု လပွတ္တာ သက္ကယ်သောင်မှ ဒေသခံ ဆားတောင်သူက ပြောသည်။
ဆားကွင်း တဧက အရင်းအနှီး ကျပ် (၃) သိန်းခန့် ကုန်ကျပြီး ဆားတောင်သူတဦးလျှင် အနည်းဆုံး ဆားကွင်း (၁၀) ဧကခန့် လုပ်ကိုင်ရာ အရင်းအနှီးများစွာ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဆားတောင်သူများမှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် စစ်အစိုးရက ယမန်နှစ်က ချေးငွေအစီအစဉ် လုပ်ပေးပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းအန်ဂျီအိုများကမူ အရင်းအနှီးကြီးသည့်အတွက် ပရိုပိုဆယ်တင်ကာ လုပ်ပေးမည့်သူမရှိကြောင်း လပွတ္တာအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုဝန်ထမ်းတဦးထံမှ သိရသည်။
လပွတ္တာခရိုင်အတွင်း ဆားလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း (၅၀၀) ခန့်ရှိပြီး ယခုနှစ် ရင်းနှီးငွေ အခက်အခဲကြောင့် မူလ ဆားလုပ်ကွင်း
ဧရိယာ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း ဆားလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
နာဂစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရန်ပုံငွေအဖြစ် ဥရောပသမဂ္ဂက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၃.၇၅) သန်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ရန်ပုံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၈) သန်း ထပ်မံလှူဒါန်းရန် ကတိပြုထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလမှစ၍ ရဲ၊ စစ်တပ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာအချို့ကို ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း သုံးဘီးရောင် ဆိုင်ကယ်များ စီးနင်းခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ လုံးဝစီးနင်းခွင့် ပြုတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
အိုင်ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယို တင်ကြည့်တာ
အင်တာနက်ဖုန်းပြောလို့ ရတာကိုပါတင်ပေးပါမယ်..အိုင်ဖုန်းနဲ့ ရသမျှ အိုင်တက်စ် မှာပါရသည်။
(ပုံများကို အကျယ်ချဲ့ကြည့်ရန် ပုံများပေါ်တွင် ကလစ် ခေါက်ပေးပါ)
အချိန်.......................၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ နေ့ လည်၁၂ မှ ညနေ ၆ နာရီ
..................................No,1 Marina Boulevard
..................................Auditorium Level 8
လက်မှတ်တစ်စောင် ........စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၅
လက်မှတ်ဝယ်ရန် ..........ဒေါ်သန်းသန်းနု ၆၃၃၆ ၇၇၀၃ နှင့် ၆၃၃၆ ၇၆၀၁
.................................ကိုဇော်ဇော်နိူင် ၉၈၅၀ ၆၀၄၆
.................................မယဉ်ထူးထူးနိူင် ၉၄၅၀ ၂၆၄၆
ဟွန်ဒူးရပ်စ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ စတင်
ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံမှာ သမ္မတ မန်နျူရယ် ဇလေယာ (Manuel Zelaya) ကို ရာထူးကနေ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး ၅ လအကြာ ဒီကနေ့မှာ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
ဖြုတ်ချခံရတဲ့ သမ္မတ ဇလေယာရော၊ စစ်တပ်က ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားတဲ့ ယာယီခေါင်းဆောင် ရောဘတ်တို မီချဲလက်တီ (Roberto Micheletti) ပါ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်မပြိုင်ပါဘူး။
အခု သမ္မတ ဝင်အရွေးခံသူတွေက လက်ရှိ အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အတိုက်အခံဘက်က ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ ပေါ်ဖီရီရို ပက်ပီ လိုဘို (Por fi rio Pepe Lobo) က ရှေ့ပြေးနေတယ်လို့ လက်ခံကြပါတယ်။ သူနဲ့အတူ ယှဉ်ပြိုင်နေသူက လက်ရှိ အာဏာရ လစ်ဘရယ်ပါတီက အယ်လ်ဗင် ဆန်းတို့စ် (Elvin Santos) ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်းဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ မြို့တော်က ဘရာဇီးသံရုံးထဲမှာ နေထိုင်နေတဲ့ မစ္စတာ ဇလေယာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဟွန်ဒူးရပ်စ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်တာကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ ကော့စတာ ရီကာနဲ့ ပီရူးနိုင်ငံတွေက ကြိုဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ ဘရာဇီးနဲ့ အာဂျင်တီးနားတို့ကတော့ အာဏာသိမ်းခဲ့တာကိုက တရားမဝင်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံ နက်တန့်ဇ် (Natanz) မြို့က နျူကလီးယား သန့်စင်မှု လုပ်ငန်းတွေ အဓိက လုပ်ကိုင်တဲ့ စက်ရုံတွေလိုမျိုး နောက်ထပ် စက်ရုံသစ် ၁၀ ခု ဆောက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ အီရန်အစိုးရက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စက်ရုံသစ်အတွက် နေရာ ၅ နေရာကို အတည်ပြု ရွေးချယ်ထားပြီး ဖြစ်သလို အီရန်နိုင်ငံက အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီကိုလည်း နောက်ထပ်နေရာ ၅ နေရာ ထပ်မံရွေးချယ်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ အစိုးရပိုင် သတင်းတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။
အီရန် နျူကလီးယားဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ အလီ အက်ခ်ဘာ ဆာလဟီ။
အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၀၉။
နေရာသစ်တွေကိုတော့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်အောင် တောင်တွေရှိရာ အရပ်မှာ တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီး ထိရောက်တဲ့ လုံခြုံရေး အစီအမံတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အီရန် နျူကလီးယားဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ အလီ အက်ခ်ဘာ ဆာလဟီ (Ali Akbar Salehi) က ပြောပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံက ယူရေနီယံဓာတ် သန့်စင်တဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိန်းချုပ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာက ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာပဲ အချေအတင်ဖြစ်စရာ နျူကလီးယား အစီအစဉ်တွေ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို အီရန်နိုင်ငံက ကြေညာလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:52 AM No comments:
ဒူဘိုင်း ကြွေးမြီပြဿနာ ယူအေအီးနိုင်ငံ ကူမည်
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံက ကြွေးမြီဒေါ်လာ သန်းထောင်နဲ့ချီပြီး မပေးနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေရာက အဆုံးအရှုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက ဘဏ်တွေကို ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးသွားမယ်လို့ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု (UAE) ရဲ့ ဗဟိုဘဏ်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
UAE နိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြတဲ့ ဘဏ်တွေကို နောက်ထပ် ငွေကြေးပံ့ပိုး ကူညီသွားဖို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်း ဗဟိုဘဏ်က မနေ့တုန်းကပဲ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတုန်းကတော့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံက အစိုးရပိုင် Dubai World ကုမ္ပဏီက သူ့ရဲ့ ကြွေးရှင်တွေကို ပေးစရာရှိနေတဲ့ ဒေါ်လာ သန်း ၆၀,၀၀၀ ကို နောက်ထပ် ၆ လအထိ ဆိုင်းငံ့ပေးထားဖို့ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး မျှော်စင်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာ အပါအ၀င် အိမ်မြေဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ကြီးထွားမှုနဲ့အတူ နိုင်ငံမှာ ကြွေးမြီတွေ တိုးပွားလာခဲ့တာပါ။
ဒီလို ဒူဘိုင်းနိုင်ငံက ကြွေးမြီပြဿနာက တက်သစ်စ နိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ဒူဘိုင်းကို အကြွေးပေးနေတဲ့ ဥရောပဘဏ်တွေကို ဂယက်ရိုက်ခတ် လာလေမလား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက အထိတ်တလန့် ဖြစ်ကြပြီး ကမ္ဘာ့ စတော့ခ်ရှယ်ယာ ဈေးတွေလည်း ကျဆင်းခဲ့တာပါ။
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့က စတော့ခ် ဈေးကွက်တွေကတော့ မူဆလင် အားလပ်ရက်ဖြစ်တဲ့ အိဒ်နေ့ ကုန်ဆုံးပြီး ဒီကနေ့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အ သုံးလုံးသင်တန်းပြန်လည်ထွန်းကားလာရတော့မည့် မြန်ပြည်...
ကျောင်းစရိတ်ကတစ်နှစ်ကို သုံးသောင်း လေးသောင်း ကိုအဝေးရောက် မြန်ပြည်သားတွေ ကုသိုလ်ပြုနိူင်ကြပါစေ...
ပြဿနာအရင်းအမြစ်က သူတို့ လေးတွေရှာတဲ့ ငွေ ကိုမှီခိုနေရတဲ့သူ ရှိနေတာပဲ.....
နိူင်ငံတကာက ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက် တော့ ငတ်မွတ်နေတဲ့ ကလေးပုံကိုရိုက်ပြီး ဓာတ်ပုံ ဆုရခဲ့ ပြီး ငတ်မွတ်နေတဲ့ ကလေးကတော့ ငတ်မွတ်ပြီးသေဆုံးသွားလေရဲ့ ....
အခု သတင်းရယူတဲ့သူရော ....သတင်းတော့ ရယူပြီး အကူအညီပေးမိရဲ့ လား...ပေးမိနိူင်ပါစေလို့...မျှော်ရည်လျှက်..
....မျှော်လင့်စရာ....အလွှတ်ပညာသင်ကျောင်းတွေ ပေါ်လာတော့ မယ် ဆိုတော့ ...အခမဲ့ ပညာသင်ကျောင်းတွေ ပေါ်လာတော့မှာပါ...
သူတိုလေးတွေ ပညာ မလိုချင်လို့ မှမဟုတ်တာ...
ရုရှားရထား ဗုံးကွဲ ၂၅ ဦးသေ
ရုရှားနိုင်ငံမှာ ခရီးသည် ၂၆ ယောက် သေဆုံးပြီးတော့ ၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အမြန် မီးရထား လမ်းချော် တိန်းမှောက်မှုဟာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လို့ ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
မော်စကို မြို့တော်ရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၂၅၀ လောက်အကွာမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မီးရထားမှောက်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်း အကြွင်းအကျန်တွေကို တွေ့ရှိတယ်လို့ ရုရှား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးတွေက ဒီကနေ့ စနေနေ့မှာ ပြောပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှု စွဲချက်တွေနဲ့ စွဲနိုင်လောက်တဲ့အထိ ပစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို စတင်လုပ်နေပြီလို့ အစိုးရ ရှေ့နေတွေက ပြောပေမယ့် သံသယရှိသူတွေဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ဖော်မပြောသေးပါဘူး။
ရထား အပျက်အစီးပုံတွေကြားမှာ အရှိန်ကြောင့် ချိုင့်ဝင်သွားပုံရတဲ့ တွင်းငယ်လေး တခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ မီးရထား ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီးရထား သံလမ်းအပိုင်းတချို့လည်း ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
မော်စကိုမြို့တော်ကနေ မြောက်ပိုင်း စိန့်ပီတာစ်ဘတ် မြို့ကိုအသွား ခရီးသည် ၆၀၀ ကျော်ပါတဲ့ နာ့စ်ကီး အမြန်ရထား တိန်းမှောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေသူ ၁၈ ယောက်ကို ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေက နေ့မအားညမအား ရှာဖွေနေပြီးတော့ သေဆုံးသူ အရေအတွက်ဟာ တိုးလာနိုင်တယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာပြည့်တန်ဆာအချို့ AIDS ရောဂါကြောင့် သေဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့နယ် ဖန်းငါးမြို့ အခြေစိုက် စေတနာရှင် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ကနေ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ပြည့်တန်ဆာ ၁၂ ဦး ဟာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီထဲက အမျိုးသမီး ၂ ဦးဟာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါနဲ့ နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဟပ်ယိုင် ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဝေဒနာရှင် ၁၀ ဦးကတော့ ဆေးရုံမှာပဲ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရပေမယ့်လို့ မျှော်လင့်ချက်ကတော့ မဲ့နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို စုံစမ်းထားတဲ့ စံခလဘူရီ အခြေစိုက် သတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန် က တင်ပြထားပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်ကနေ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို အလုပ်ရှာရင်း ပြည့်တန်ဆာရုံမှာ ရောင်းစားခြင်း ခံရတဲ့ အမျိုးသမီး ၂ ဦးဟာ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ အချိန်ကျော်ကျော်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ ကာယကံရှင်နဲ့ နီးစပ်သူတဦးက ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့နယ် ဖန်းငါး မြို့ အခြေစိုက် စေတနာရှင် လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ကနေ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ပြည့်တန်ဆာ ၅၈ ဦးထဲက အမျိုးသမီး ၁၂ ယောက်ဟာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့လို့ ဟပ်ယိုင် ဆေးရုံမှာ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေစဉ်အတွင်း အခုလို ကွယ်လွန်သွားတာပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ဖန်းငါး ဒေသက စေတနာရှင် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင် ကိုဝင်းပိုင် ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့ အခုလို ပြောပါတယ်။
"မနက်စောစောတုန်းက ၈ နာရီ ၉ နာရီလောက်မှာ ဦးပဇ္ဇင်းတပါးနဲ့ စကားပြောရင်းနဲ့ပဲ အသက်ကုန်သွားတာ။ အချို့လူတွေကလည်း စကားတောင် မပြောနိုင်ကြဘူး။ ရောဂါဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး ၁၂ ယောက်ထဲမှာ မိန်းကလေး ၂ ယောက် သေသွားပြီ။"
အမျိုးသမီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဂိုဏ်းဖွဲ့ထားတဲ့ လူကုန်ကူး ပွဲစားတွေကနေတဆင့် အခြား ပွဲစားတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ပြည့်တန်ဆာရုံမှာ ရောင်းစားတာ ခံခဲ့ရတယ်လို့ ကိုဝင်းပိုင် က ပြောပါတယ်။
"ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ပွဲစားက တယောက်ကနေတယောက် လက်ထဲ လွှဲလိုက်တာပေါ့လေ။ ရှမ်းပွဲစားကို အပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီရှမ်းပွဲစားကနေ ဒီထဲက တခါတည်း လှတဲ့မိန်းမလေးတွေကို သူတို့ ယူထားလိုက်တယ်ပေါ့။ သူတို့က ဟိုနေ့ပို့မယ်၊ ဒီနေ့ပို့မယ်၊ မနက်ဖြန်ပို့မယ်ဆိုလို့။ သူတို့က လှေတွေကားတွေ လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ တနေရာမှာ ထားလိုက်တယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့ အမျိုးသမီးတွေက နားမလည် မသိတဲ့အခါကျတော့ - အေး သွားမယ်၊ ပို့မယ်ပို့မယ် ဆိုပြီးတော့ လူတွေက သူတို့ကို တနေရာမှာ သွားရောင်းစားတယ်။"
ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ အမျိုးသမီး ၁၂ ယောက်ဟာ ဆေးရုံမှာပဲ ဆေးဝါးကုသနေရပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ သူတို့ဘ၀ကို ကြောက်ရွံ့အားငယ်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ မွန်အမျိုးသမီးတဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ မွန်ဘာသာနဲ့ အခုလို ပြောပြပါတယ်။
သူမ ပြောပြတာကတော့ - "ကျမတို့ စုစုပေါင်း ၁၂ ယောက်လောက် ဒီရောဂါ ဖြစ်နေပါတယ်။ မနက်တုန်းကဆိုရင် ကျမတို့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် ဆုံးသွားရှာတယ်။ အခု ကျမတို့ ၅ ယောက်ပဲ ဒီမှာကျန်နေခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ ၅ ယောက်ကတော့ ရနောင်းကို ပို့လိုက်တယ်။ တကယ်လို့ သူတို့သာ နေထိုင်ကောင်းရင် ဒီရောဂါ ကုသလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ ခုနကပဲ ထွက်သွားကြတယ်။ ကျမတို့က ရောဂါ သည်းနေပြီလေ။ ကျမတို့ကလည်း သိပ်ကြာကြာ မနေရတော့ဘူးလေ။ လူကလည်း နေမထိစားမ၀င်၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲပြီး နာကျင်နေတယ်။ သေတာထက်တောင် ဆိုးသေးတယ်၊" - လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီရောဂါ ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ နေရပ်ကို ပြန်ချင်ပေမယ့်လည်း မိသားစုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ မိမိတို့ရဲ့ အရှက်ကိုငဲ့ပြီး သင့်လျော်တဲ့ ဆေးရုံတခုခုမှာ ဆေးဝါးကုသချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ စံခလဘူရီ အနီးက ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးရုံမှာ ပို့ဆောင်ဖို့ အဆက်အသွယ် ရှာနေတယ်လို့ လူနာနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတဦးက ပြောပါတယ်။
အခု ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့် စော်ကားမှုတွေဟာ ရှေးကထက် ပိုများလာတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး လေ့လာစောင့်ကြည်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ဟာ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အတွက် အလုပ်လုပ်ခွင့် ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက် ရရှိထားပေမယ့် ဒါကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ကတော့ အားနည်း နေသေးတဲ့အတွက် လတ်တလော အခြေအနေမှာ လူကုန်ကူး ပွဲစားတွေကိုပဲ အားကိုးနေရတော့ ဒီ လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမယ်လို့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက ဆိုပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:58 AM No comments:
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး မြင့်တက်မှုနှင့်အတူ လိုက်တက်လာခဲ့သော မြန်မာ့ရွှေဈေးသည် ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတလျှောက် စံချိန်တင် ဈေးနှုန်းဖြစ်သည့် ၆ သိန်း ၁ သောင်း ၃ ထောင်ကျော် သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၆ သိန်း ၉ ထောင်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။
''၂၃ ရက်နေ့မှာ ရွှေဈေးက ၆ သိန်းကို စရောက်တယ်။ နောက်နေ့ကျတော့ ၆ သိန်း ၁ သောင်းလောက်အထိ ခုန်တက်သွားတယ်။ ၂၆ ရက်နေ့မှာတော့ ၆ သိန်း ၁ သောင်း ၃ ထောင့် ၅ ရာနဲ့ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သွားတယ်။ နောက် နည်းနည်း ပြန်ကျသွားပြီး ဒီနေ့မနက်တော့ ၆ သိန်း ၉ ထောင်နဲ့ ဈေးဖွင့်တယ်'' ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကြီး ရွှေဆိုင်ကြီးတခုက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး စံချိန်တင် မြင့်တက်နေသော်လည်း အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့် မြန်မာငွေ လဲလှယ်နှုန်းမှာ ၇ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အနိမ့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိနေသဖြင့် ရွှေဈေးတက်ရခြင်းမှာ ပြည်တွင်းဝယ်လိုအား များသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
''နှစ်တိုင်း နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ ရွှေက အဝယ်လိုက်ပြီး ရွှေဈေးတက်လေ့ ရှိတယ်။ ရွှေလောကမှာတော့ ဘိန်းရာသီလို့ ခေါ်တယ်။ နှစ်တိုင်း ဒီလိုဘိန်းထွက်ချိန်ဆို ရွှေက အရမ်းရောင်းရတယ်။ ဒီနှစ်က ကမ္ဘာ့ပေါက်ဈေးကလည်း စံချိန်တင်ဖြစ်နေတော့ အရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ ဈေးကို ရောက်သွားတာပေါ့'' ဟု အဆိုပါ အမှုဆောင်က ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ၆ သိန်းအထက် မြင့်တက်နေသော ရွှေဈေးနှုန်းသည် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းအထိ မန္တလေးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှ ရွှေအဆွဲများမည် ဖြစ်သောကြောင့် ယခုနှစ်ကုန်သည်အထိ ၆ သိန်းအောက်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ရန် မလွယ်တော့ကြောင့် ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူ အများစုက သုံးသပ်သည်။
ဒုတိယအကြိမ်မှာ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၅ ထောင်တန်များ ထုတ်ဝေမည်ဟု သတင်းကြေညာပြီး နောက်တနေ့တွင် ၆ သိန်း ၃ ထောင်အထိ ဈေးတက်သွားခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် ၆ သိန်းအောက်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။
စင်ကာပူ အခြေစိုက် ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာ ကုမ္ပဏီတခုဟာ နောက်နှစ်ဆန်းကစပြီး မြန်မာ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွေ သွယ်တန်း ချထားဖို့အတွက် ဒေါ်လာသန်းချီတဲ့ လုပ်ငန်း ကန်ထရိုက်တခု လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်ပါတယ်။
မိုင် ၉၀ ရှည်လျားတဲ့ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သယ်ဖို့ ဒေါ်လာ ၇၇ သန်းတန် စာချုပ်တခုကို အမည်မဖော်ထားတဲ့ မြန်မာကုမ္ပဏီတခုနဲ့ ဆွိုင်ဘာ (Swiber Holdings Company Ltd.) တို့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်း ကုမ္ပဏီက သောကြာနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လုပ်ငန်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေကို နောက်လမှာ စမယ်လို့ ဆွိုင်ဘာ ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်မှာ လုပ်ငန်းခွင် စတင်မှာဖြစ်ပြီး ၆ လအတွင်း ပြီးစီးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်င်နဲ့စင်ကာပူ အပါအ၀င် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ စတဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားကုန်သွယ် ဆက်ဆံရေးတွေ ထူထောင်ထားပါတယ်။
japan deflation problems
(ရန်ကုန် သတင်းထောက် ပေးပို့သော သတင်းကို ဖနိဒါ ဖြည့်စွက်ရေးသားသည်။)
မြန်မာမြင်း ၆ ကောင် နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်များတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရ
ကမ္ဘာ့မြင်းစီး အားကစား အဖွဲ့ချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြိုင်မြင်း ၆ ကောင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လာမည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် တာဝေးပြိုင်ပွဲသို့ ပထမဆုံး သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပြုလိုက်ပြီဟု မြန်မာနိုင်ငံ မြင်းစီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ် (MEF) က ပြောသည်။
ဆွစ်ဇာလန်ရှိ ကမ္ဘာ့မြင်းစီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ်သို့ လျှောက်ထားရာ ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းနှင့် ပင်လုံလမ်းထောင့်ရှိ MEF မှ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငြိမ်းကျော်က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့မြင်းစီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ်ဆီကို လျှောက်ထားတာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့က ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ဦးငြိမ်းကျော်သည် MEF တွင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌနှင့် နည်းစနစ်မှူးအဖြစ် တွဲဖက်တာဝန်ယူထားပြီး အာဆီယံ (အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ အသင်း) မြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ်တွင်လည်း ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲများသို့ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိလိုက်သည့် မြင်းများမှာ စိန်ဘယက်၊ ပုဂံမင်းသမီး၊ လှသိင်္ဂီ၊ Peach၊ ရွှေဆယ်နှင့် ရွှေဥက္ကာ အမည်ရ မြင်းများ ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း ပုဂံမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော မြင်းစီးပြိုင်ပွဲသို့ အာဆီယံ မြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ်မှ ဆရာဝန်များ လာရောက်စဉ် ယခုမြင်းများကို စစ်ဆေးပြီးနောက် နိုင်ငံတကာပွဲများသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီကြောင်း ကမ္ဘာ့မြင်းစီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ်သို့ ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုမြင်းများသည် မြင်းစီး တာဝေးပြိုင်ပွဲ အတွက်သာဖြစ်ပြီး မြင်းစီး တန်းကျော်ပြိုင်ပွဲအတွက် မဟုတ်ပါ။
ယခင်က နိုင်ငံတကာ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲများသို့ MEF က သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အခြားနိုင်ငံများမှ မြင်းများကို ငှားရမ်း၍ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
မြန်မာမြင်းများကို လေကြောင်းခရီးဖြင့် သယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် အရည်အချင်း မစစ်ဆေးဘဲ၊ လာမည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် ထိုင်း၌ ကျင်းပမည့် အာဆီယံ မြင်းစီး အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ရေးအတွက် အာဆီယံ မြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူများကို ဖိတ်ခေါ်၍ စတင်စစ်ဆေးစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ခါတိုင်းလိုတော့ သူများမသုံးချင်တဲ့ မြင်းမျိုး မသုံးရတော့ဘူးပေါ့။ တခြား တိုင်းပြည် သွားပြိုင်တဲ့အခါတိုင်း မြင်းငှားရတယ်ဗျာ။ အဲဒီမှာ အမြဲတမ်း မကောင်းတဲ့မြင်းပဲ ကိုယ်ကရတယ်။ အခုတော့ ကိုယ့်မြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကစားသမားဆိုတော့ အများကြီး အဆင်ပြေတာပေါ့” ဟု ဦးငြိမ်းကျော်က ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး ''အခုဟာက ထိုင်းမှာဆိုတော့ နီးတဲ့အတွက် သယ်ယူသွားပြီး ပြိုင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းလို နေရာမျိုးဆို လေယာဉ်နဲ့ သယ်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမြင်းတွေနဲ့ ပြိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲလို အခက်အခဲလေးတွေ ရှိတယ်'' ဟု ပြောသည်။
မြင်းများကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်သို့ ကားများဖြင့် သယ်ယူသွားကာ၊ ထိုမှတဆင့် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရာသို့ ဆက်လက် ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။
လာမည့်လအတွင်း အိမ်နီးချင်း လာအိုနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၅ ကြိမ် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် မြင်းစီးအားကစားပွဲ မပါဝင်သဖြင့် လာမည့်နှစ် အာဆီယံ မြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ်က အရှေ့တောင်အာရှ မြင်းစီးပြိုင်ပွဲအမည်ဖြင့် ဖေဖော်ရီလတွင် သီးသန့်ကျင်းပမည့် မြင်းစီးအားကစားပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် MEF (Myanmar Equestrian Federation) သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ကျွန်း၌ ပြုလုပ်သော မြင်းစီး အားကစားပွဲတော်တွင် ရွှေတံဆိပ် ၃ ဆု၊ ငွေ ၂ ဆုနှင့် ကြေး ၁ ခု ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သေးသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:24 PM No comments:
ယခုနှစ် ခရီးသွား ရာသီတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီသွား အရေအတွက်မှာ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မား လာကြောင်း မြန်မာဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန (ဟိုတယ်/ခရီး) မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနမှ တာဝန်ခံတဦးက“ အခုရာခိုင်နှုန်းက မနှစ်က ဒီအချိန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တာ တော်တော်များတယ်၊ ဒါတောင်အခုခရီးသွားရာသီ မပြီးသေးဘူး”ဟုပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်သည့် ခရီးသွားများသည် ဥရောပတိုက်မှ ဂျာမနီ နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့မှဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်တွင် ထိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ပိုမိုလာရောက်ကြကြောင်း၊ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ လေကြောင်းခရီးသွားများထက်စာလျှင် နယ်စပ်မြို့ များမှ ၀င်ရောက်မှုမှာပိုမိုများပြားကြောင်း သိရသည်။
နယ်စပ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လာရောက်သည့် ခရီးသွားများသည် နယ်စပ်ဒေသများအတွင်းသာလည်ပတ်နိုင်ပြီး ခရီးသွား အများစုသည် ရာသီဥတုကောင်းမွန်သည့် အောက်တိုဘာလမှ စတင်၍ ဇန်န၀ါရီလ အထိသာ အများအပြားသွားလာကြောင်း ဟိုတယ်/ခရီး ဌာနမှ တာဝန်ခံကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်များ ၀င်ရောက်မှုသည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်က နှစ်သိန်းခြောက်သောင်းကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ခရီးသည်ပေါင်း ၁သန်းခန့် ၀င်ရောက်ရန် ခန့်မှန်းထားသည်ဟု မြန်မာဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အစီအရင်ခံစာများအရသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ပိုမိုလာရောက်စေရန်အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့်မြှင့်တင်ရေး ပြပွဲများ ကို ပြုလုပ်နေရာ မကြာသေးမီက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့နှင့် စကာင်္ပူနိုင်ငံတို့တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ရေး အတွက် ပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်းတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ပြပွဲများလုပ်ကိုင်ရန်ရှိကြောင်း အထက်ပါ ဟိုတယ်/ခရီး ဌာန တာဝန်ခံကပြောသည်။
မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သံဃာတော်များဦးဆောင်သော ရွှေဝါရောင်တော် လှန်ရေးနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလတွင်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ခရီးသွားဦးရေ ကျဆင်းသွားကြောင်း ၊ ယခုနှစ်အတွင်းပြန်လည်ဦးမော့လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လျှင် အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်သည့် နေရာများမှာ ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊ပုဂံ နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အင်လေးကန်ဒေသများသို့ အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်သည်ဟု တောင်ကြီးမြို့ခံတဦးကလည်း ပြော သည်။
“ကလောမြို့နားက ပလောင်တောင်လို့ခေါ်တဲ့ ပလောင်ရွာတွေကို အများဆုံးလာတယ်၊ ပလောင်လူနေမှုကို လေ့လာတယ်”ဟု အဆိုပါ မြို့ခံကဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများသည် အောင်ပန်းမြို့အနီးရှိ တောလမ်းခရီးမှ အင်းလေးကန်သို့ ခြေလျင်ခရီးထွက်ခြင်း၊ တောင်ကြီးမြို့ အနီးရှိ ထာ့စမ်းဂူနှင့် ကိုရင်လေးဂူများသို့သွားရောက်လေ့လာခြင်း၊ ကလောမြို့အနီးရှိ တောင်ပေါ်ရွာများမှနေပြီး မိထ္တီလာကန် နှင့် အခြားသောမြေပြန့်ဒေသ ရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုကြသည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ နှင့် သဘာဝအလှအပများ သည် တခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ နှင့် နှိုင်းစာလျှင် ပိုိုမိုများ ပြား သည်ဆိုသော်လည်း မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် လစ်ဟာမှုအများအပြားရှိနေသေးကြောင်း၊အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နှိုင်းစာ လျှင် ခရီးသည်များ ၀င်ထွက်မှုမှာ နည်းပါးသေးကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် ဦးမောင်မောင်စိုးက ထောက်ပြသည်။
“ခရီးသည်အတွက် ခရက်ဒစ်ကတ်သုံးမရသေးဘူး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုမရှိသေးဘူးလေ၊ ပြီးခဲ့တဲ့လက ခရီးသည်သုံးယောက် ပုဂံမှာ ဆုံးသွားတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများ အတွက် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း နှင့်ညီညွတ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိကြောင်း၊ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွင်လည်း ခရက်ဒစ်ကတ် (အကြွေးဝယ်ကတ်) အသုံး ပြုမှုမှာနည်းပါးနေသေးပြီး ဟိုတယ်ကြီးများတွင် ငွေလဲလှယ်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ထုတ်လျှင် ၁၀ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ဖြတ် ကြောင်း၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်အစိုးရက ထိရောက်စေရန် ခရီးသွားကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နည်းပါး ကြောင်း၎င်း ကထောက်ပြသည်။
“အင်းလေးတို့လို တခြားစိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေမှာ တကယ်တမ်းလူကျလာရင် ကားကအစပေါ့ ပေးနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုက ဘာမှမရှိ ဘူး၊၊မင်းကွန်းကိုကူးချင်လို့ ဖယ်ရီငှားမရဘူး၊ တစီးလုံး ဈေးကြီးပေးငှားနေရတယ်”ဟု၎င်းကဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အရှုံးပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပေါ်တွင် တည်မှီ၍ လုပ်ကိုင်နေသည့် ခရီးသည် များစီးသည့် အင်ဂျင်၊ အဲယားကွန်းနှင့် မောင်းနှင်သူစသည့် ၀န်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သည့် ကားလုပ်ငန်းများကို ရောင်းချခဲ့ကြရသည် ဟုသိရသည်။
မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် တိုင်းပြည်၏ ၀င်ငွေကို တခြားသောရေနံသဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဆန်စပါး၊ သစ်လုပ်ငန်းများကဲ့သို့ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာငွေကို ရှာဖွေပေးသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား စစ်အစိုးရအနေဖြင့်မြှင့်တင်ချင်လျှင် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေးမှအစ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို သေချာစွာ ပြုပြင်မှသာလျှင် ခရီးသွား လုပ်ငန်းပိုမို တိုးတက်လာမည်ဟု ဦးမောင်မောင်စိုးကသုံးသပ်ဝေဖန်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာဘ (ခေါ်) မက်သာ အဖက်တမင်း စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရရှိမှုမှာ ယခင် နှစ်များထက် (၄) ဆခန့် ပိုမိုများပြား လာကြောင်း မှုးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းက ရှမ်းပြည် အရှေ့မြောက်ပိုင်း လောက်ကိုင်မြို့၌ ကျင်းပသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးပွဲတွင် စစ်အစိုးရ ဖျက်ဆီးပြခဲ့သော မက်သာအဖက်တမင်း စိတ်ကြွဆေးပြား အထုတ်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
အဆိုပါ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော“2009 Patterns and Trends of Amphetamine - Type Stimulants and Other Drugs in East and South-East Asia”ဟု အမည်ရသည့် အစီရင်ခံစာတွင် ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
UNODC ၏ ထုတ်ပြန်ချက်၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း စိတ်ကြွဆေးပြား အလုံးရေ တစ်သန်းကျော် ဖမ်းဆီးမိခဲ့ သော် လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၆ လခန့် အတွင်း၌ပင် ၎င်း ဆေးပြား လေးသန်းခွဲ ဖမ်းဆီးရမိသည့်အတွက် ယခင်နှစ်များထက် ၄ ဆခန့် ပိုမိုများပြာလာသည်ဟု ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
"မူးယစ်ဆေးဝါး ထွက်ကုန်တွေဟာ နယ်စပ်ဒေသမှာ ပိုပြီးတော့ များလာတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်" ဟု UNODCကိုယ်စားလှယ် အရာရှိတဦးဖြစ်သူ မစ္စတာ ဂါရီလူးဝစ္စက ယမန်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ထိုင်းနိုင်ငံမှ သာမက ဒေသတွင်း နိုင်ငံများဖြစ်သည့် လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှတဆင့် ပျံ့နှံ့ လျက်ရှိသည်ဟုလည်း မစ္စတာ ဂါရီလူးဝစ္စက ဆိုသည်။
ထုိ့ကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်သူများသည် မူးယစ်ဆေးဝါးကို လက်ဝယ်တွင် မထားရှိတော့ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ အကြွေးစနစ်ဖြင့် လည်းကောင်း ဈေးနှုန်းလျှော့ချ၍လည်းကောင်း တင်သွင်းနေကြောင်းလည်း သတင်းများဖော်ပြချက် အရသိရ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နှင်းမှုများကို ကိုးကန့်တိုက်ပွဲပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ယခင်ကထက် ပိုမိုလုပ်လာပြီး၊ သြဂုတ်လ အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုပေါင်း ၂၃၀ နှင့် တရားခံပေါင်း ၃၅၅ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ကြောင်း စစ်အစိုးရ သတင်းစာ များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အလားတူပင် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နန်းခမ်းမြို့ရှိ ပန်းဈေး ကျေးရွာများနှင့် ကချင်ပြည်နယ်များတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုများကို ယခင်နှစ်ထက် ပိုမို စိုက်ပျိုးလာကြောင်းလည်း မျက်မြင်များကဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မကြာခင်က ရောက်ရှိလာသည့် မျက်မြင် ပလောင် အမျိုးသမီး တဦးဖြစ်သူ လွေးမိုးလှိုင်က“ ဒီနှစ်မှာ ကြည့်ရတာ လမ်းဘေးတွေမှာကို ဘိန်းတွေ တော်တော်စိုက်တယ်၊ ဘယ်လောက်အစိုက်များလည်း ဆိုလို့ရှိရင် ပန်းဈေးရွာက လူတွေက ဘိန်း စိုက်တဲ့ ခြံတွေမှာ မြေသွားပေါက်ကြတယ်၊ သွားပေါက်တော့ သူတို့ကို စရိတ်ငြိမ်း သုံးရက်ကို မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သောင်း ပေးတယ်၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေက သွားလုပ်ကြတာများတယ်”ဟု ပြောသည်။
ကချင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်(KDNG)မှ ကိုအောင်ဝါကလည်း“ကချင်ပြည်နယ်မှာ သစ်လုပ်ငန်းတွေ နားနေတယ်၊ ကျောက်စိမ်း လုပ်ငန်း တွေလည်း အရင်ကလို လုပ်တဲ့လူတွေနည်းလာတယ်၊ ရွှေလုပ်ငန်း နည်းနည်းပဲ ရှိတယ် ဆိုတော့ ဘိန်းတွေကို နေရာတကာ စိုက် ပျိုးလာတယ်၊ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကို စီးပွားရေး ၀င်ငွေအဖြစ်၊ လုပ်လာတဲ့အပိုင်းမျိုး မြင်လာတယ်”ဟု ပြောသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တချို့သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များက ထုတ် လုပ်နေကြပြီး တာချီလိတ်မြို့ဘက်မှ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ သယ်ဆောင်ရောင်းချမှုများ ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယင်း ဒေသတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ တဖွဲ့ ဖြစ်သော ၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်ဖွဲ့ (UWSA) သည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများကို အာရှတွင် အမြောက်အမြား ကျယ်ပြန့်စွာ ထုတ်လုပ်နေသည့် အဖွဲ့ တဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။
မြန်မာအာဏာပိုင်များကလည်း မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်းကို ဖမ်းဆီးမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ နော်ခမ်းသည် ရွှေတြိဂံ ဒေသတွင် မူး ယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုကုန်ကူးနေသူဖြစ်ပြီး ၎င်းကို တရုတ်၊ ထိုင်းနှင့် လာအို နိုင်ငံများကလည်း အလိုရှိနေသည်။
အမေရိကန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့ ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ကမ္ဘာတဝန်းတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်သည် ဘိန်းအများဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒုတိယ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ထဲ တရားမ၀င် ငါးဖမ်းမှုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲမှာ အဖမ်းအဆီး ခံခဲ့ရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ငါးဖမ်းသမား ၁၄ ဦး ပြန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ဖိလစ်ပိုင် သံအရာရှိတွေ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် သံအရာရှိတွေဟာ အဖမ်းခံနေရတဲ့ ငါးဖမ်းသမားတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီး သူတို့ကို အိမ်ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ရန်ကုန် ဖိလစ်ပိုင်သံရုံးက ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ် အာဏာပိုင်တွေဟာ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ထိုင်ဝမ် ငါးဖမ်းလှေ အများအပြားကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ၁၄ ဦး အပါအ၀င် ငါးဖမ်းသမား ၁၂၈ ဦးကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲက အများစုဟာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသတွင်း သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြကြပါတယ်။
သူတို့ကို ရန်ကုန်က နာမည်ကြီး အင်းစိန်ထောင်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ သံတမန်တဦးရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား ဖော်ပြပါတယ်။ အင်းစိန်ထောင်ဟာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ထောင် ဖြစ်ပြီး မကြာခင်ကဘဲ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။
အဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ အထဲမှာ တရုတ်ပြည်မနဲ့ ထိုင်ဝမ်က ငါးဖမ်းသမားတွေလည်း ပါတာမို့ ဒီလူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ တရုတ်အစိုးရက မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:13 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချို့ မူးယစ်ဆေးတွေ ဖြန့်ဖြူးနေ
သိန်းပေါင်း သောင်းချီကုန်ကျနိုင်မည့် ယခုကဲ့သို့ Shelter ဆောက်လုပ်ခြင်းထက် စီးပွားရေး လုံးဝဆုတ်ယုတ် ကျဆင်းသွားသည်မှာ (၇) နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သော လက်ခုပ်ကုန်း ကမ်းခြေဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ၊ တွံတေးလိုင်းခွဲမှ ယူထားသော လျှပ်စစ်မီးစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းလိုင်းများ ပြည့်စုံကောင်းမွန်ရန်သာ ဒေသခံတို့က ပိုမိုလိုလားနေကြသည်။
ဒလ-လက်ခုပ်ကုန်း ကားလမ်းသည် (၂၈) မိုင်ရှည်လျားပြီး ဓနုတ်ကျေးရွာအထိသာ ကတ္တရာလမ်းသား အတန်အသင့်ရှိသည်။ ဓနုတ်ကျေးရွာအလွန် ၀ါးဘလောက်သောက်၊ နှစ်ခွရွာ၊ ရေတိမ်ရွာတို့မှသည် လက်ခုပ်ကုန်းကျေးရွာအထိမှာ မြေသားရော ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည်။ ခရီးသည်တင် ဂျစ်ကား (၂) စီးသာထွက်ရှိပြီး နေ့တ၀က်မောင်းရသည်ဟု သိရသည်။
ယခင်က လက်ခုပ်ကုန်းကမ်းခြေသည် လှိုင်းလေထန်၍ လှေလှော်ရွက်တိုက်အသင်းများ လာရောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည်။
ပင်လယ်လေလှိုင်းအားနှင့် ပန်ကာဒလက်များ လည်ပတ်စေကာ လျှပ်စစ်ထုတ်ယူရန် နှစ်ရှည်သုတေသနပြုခဲ့ဖူးပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း အထူးဇုန်အဖြစ် နအဖမှ သတ်မှတ်ကာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
သို့သော် ပင်လယ်သဘာဝ ပြောင်းလဲမှုအရ လက်ခုပ်ကုန်းကမ်းခြေနှင့် (၁) မိုင်ခန့်အကွာ၌ သောင်ရှည်ကြီး ပေါ်ထွန်းလာပြီး ကမ်းခြေသို့ လှိုင်းမရိုက်တော့ဘဲ ခရီးသွားကျဲပါးလာကာ လက်ခုပ်ကုန်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ၊ ဒေသခံတို့၏ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
နာဂစ်လေဘေးသင့်စဉ်က လက်ခုပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် (၄) ပေခန့် ပင်လယ်ရေ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး လက်ခုပ်ကုန်းရွာသား (၃) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း၏သား အဓိကရှယ်ယာပါဝင်သည့် ဧရာဟင်္သာကုမ္ပဏီသည် မော်လမြိုင် အမှတ် (၁) ဈေး ဆောက်လုပ်ရာ တွင် အမြတ်ငွေ ကျပ် သိန်းပေါင်း (၁) သိန်းကျော် ရရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၌ ပါဝင်ခဲ့သူ အင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ ဈေးဆောက်တာ ဆိုင်ခန်းပေါင်း (၁,၃၃၆) ခန်း ထွက်တယ်။ မူလပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အခန်း (၁,၁၂၄) ခန်းကို တခန်း ကျပ် သိန်း (၅ဝ) သွင်းခိုင်းတာက ကျပ်သိန်းပေါင်း (၅၆,၂ဝဝ) ရတယ်။ ကုမ္ပဏီခွဲတမ်းက ပိုတဲ့ အခန်းပေါင်း (၂၁၂) ခန်း ကို အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း (၄ဝဝ) လောက်နဲ့ ဈေးဖွင့်ရောင်းတာ၊ အကြမ်းဖျဉ်း ကျပ်ငွေ သိန်းပေါင်း (၈၄,၈ဝဝ) ရတယ်။ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ သိန်းပေါင်း (၁) သိန်း (၄) သောင်း ကျော်တယ်။ ဈေးဆောက်တာက ကျပ်သိန်း (၄) သောင်း မကုန်ဘူး။ ဒီတော့ စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ ကျပ် သိန်းပေါင်း (၁) သိန်းကျော်ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ဧရာဟင်္သာကုမ္ပဏီသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်း၏သား အောင်သက်မန်း၊ မော်လမြိုင်မြို့ခံ တိုင်းမှူးနှင့် ရင်းနှီးသည့် စီးပွားရေးသမားများပါဝင်ပြီး အမှတ် (၁) ဈေး ဆောက်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဈေး မီးလောင်ပြီးနောက်ပိုင်း မော်လမြိုင်အခြေစိုက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ ဈေးသစ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရန် အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်တိုင်းမှူးထံ တင်ပြခဲ့သော်လည်း ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်း၏သားနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန် ညွှန်ကြားရာမှ ယခုကုမ္ပဏီ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ ဧရာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီက ခွဲတမ်းရမည့်ဆိုင်ခန်းများ ဈေးကောင်းရအောင် ဆိုင်ခန်းနေရာများကို မသမာသည့်နည်းဖြင့် ရယူခဲ့ကြောင်း ဈေးသာယာရေး ကော်မတီဝင်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကုမ္ပဏီဟာ ဈေးကောင်းရမယ့် နေရာကောင်းမှန်သမျှ ကြိုတင်ရယူထားပြီး ကျန်နေရာတွေကိုသာ မဲနှိုက်နေရာချထားပေးခဲ့တာ။ မူလ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေ မကျေနပ်ကြပေမယ့် ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်မျိုး ယခင် မြိုင်ရတနာ နှစ်ထပ်ဈေး ဆောက်ပြီး၍ ဆိုင်ခန်းနေရာ ချထားစဉ်ကလည်း ကြုံခဲ့ရကြောင်း၊ ယင်းအချိန်က ဆိုင်ခန်းနေရာချထားမှုကို ပြည်နယ်ခန်းမတွင်ပြုလုပ်စဉ် ဈေးမိဈေးဖများက ကောင်းမွန်စွာ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ခရိုင်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး ဥက္ကဋ္ဌက ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ဈေးသာယာရေးကော်မတီဝင်က ပြောသည်။
၎င်းက “ဈေးသူဈေးသားတွေအပေါ် လက်ရှိ စည်ပင်နဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဆက်ဆံပုံဟာ အရင်ကနဲ့မခြား ဘာမှမထူးခြားဘူး” ဟု ပြောသည်။
၁၉၈၉ ခုမတိုင်မီ မဆလခေတ်၌ မော်လမြိုင်မြို့သည် မှောင်ခိုမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ဈေးမြို့တမြို့ ဖြစ်လာကာ ဈေးဆိုင်တည်ခင်းရောင်းချမှု အဓိကဖြစ်လာသည့်အတွက် ဈေးများမှ ဆိုင်ခန်းများမှာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးမြင့်ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် (ရန်ကုန်) မြေနေရာအား ရောင်းချပြီးဖြစ်၍ တိရစ္ဆာန်များအား မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ဘေးမဲ့တောများသို့ ရွှေ့မည်ဟူသော သတင်းများ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ထွက်ပေါ်လျက်ရှိရာ ၎င်းတို့မှာ အခြေအမြစ်မရှိသော သတင်းများသာ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးညိုအေးက ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
ရန်ကုန်အဆင့်မြင့် အရောင်းစင်တာများဈေးပိတ်ရက် စတင်သတ်မှတ်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ပိတ်ရက် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသေးသည့် အဆင့်မြင့် အရောင်းစင်တာကြီးများကို တပတ်လျှင် တရက် ဈေးပိတ်ရက် သတ်မှတ်ရန် သက်ဆိုင်ရာက ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်စည်ပင် မြို့နယ်တာဝန်ခံတဦးက “Shopping Center အားလုံးကို ရုံးပိတ်ရက် သတ်မှတ်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပြီးပြီ။ ကျန်တဲ့အပိုင်းက သူတို့စင်တာတွေ အချင်းချင်း၊ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းတွေက ပိတ်ရက်ရွေးကြလိမ့်မယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဒါကြောင့်ဒင်း က မတရား ရိုကျိုးနေသကိုးဗျ
အခုရက်ပိုင်း ဒေါ်လာဈေးတွေ ကျနေပဗျာ ။ လူတွေလဲ အမျိုးမျိုးသုံးသပ်နေကြပါတယ်။
ဈေးကွက်ကတော့ ကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ် ဖြစ်ကြပေါ့ဗျာ။ တချို့ က အမေရိကန် က စီးပွားရေး ကျနေလို့ ဒေါ်လာငွေ ဖောင်းပွ တန်ဘိုးကျ နေလို့လဲ ပြောကြပါတယ်။
တချို့ ကျတော့ လဲ နယ်စပ်မှာ ဘိန်းပေါ်ချိန်ဖြစ်လို့ ဘိန်းက ရတဲ့ ဒေါ်လာတွေ
ပြည်တွင်း ကို လှိမ့်ဝင်လာတယ် ထင်ရတာတွေ ၊ အမျိုးမျိုး ယူဆကြပါတယ် ။
တကယ် က တော့ အစိုးရ ရဲ့ ငွေကြေးပေါ်လစီ က အဓိကအကျ ဆုံးပါ။
ပြည်တွင်း ငွေကြေးဈေးကွက်ထဲ လှည့်ပါတ်ငွေ အများဆုံး ဝင်လာအောင်
သုံးငွေ အများဆုံးထည့်နိုင်တာ လဲ သူပါဘဲ ၊ ဈေးကွက်ထဲ က ကျပ်ငွေ တွေ ကို ပြန်နှုတ်နိုင်
တာ က လဲ အစိုးရ ပါဘဲ ။
အစိုးရ က ရငွေ မရှိဘဲ ပိုက်ဆံ တွေ ရိုက်ပြီး ၊ အသုံးကြမ်းသွားရင် ဗမာငွေ ဖောင်းပွလာမှာပါ။
ရငွေ သုံးငွေ ကို ချင့်ချိန် ပြီး ၊ သူ ရ သလောက်ဘဲ ထိန်းသုံးရင် ၊ငွေဖောင်းပွ နှုန်းရပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သူ မှာရှိတဲ့ ငွေမာ ကိုပါ ဈေးကွက်ထဲ ချသုံးရင် ၊ ငွေ မဖောင်းတော့ တဲ့ အပြင်
ဈေးကွက်ထဲ ကို ငွေမာ ထည့်သလောက် ဗမာငွေ ဈေးတက်လာပါတယ်။
လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ တနှစ် ငွေမာ ဝင်နှုန်း က ဒေါ်လာ လေးဘီလျံကျော် ရှိပါတယ်။
အစိုးရ က တနေ့ကို ပျန်းမျှ ဒေါ်လာ ၁ဝသန်းကျော်လောက် ဈေးကွက်ထဲမှာ သူ သုံးနိုင်ပါတယ်။
အများပြည်သူရဲ့ ငွေမာသုံးအား က နိုင်ငံခြား က သားချင်းတွေ က ပြည်တွင်းက သူ့အိမ်ထောင်
တွေသုံးဘို့ ငွေပြန်ပို့တဲ့ ပမာဏ နဲ့ ၊ ပြည်တွင်း က နေ ၊ အပြင်မှာ ကျောင်းသွားတက်တာ တို့
အလုပ်မရခင် သုံးဘို့ ၊ ငွေထောက်ရတဲ့ ပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ရင် ၊ အပြင် က နေ ပြည်တွင်း ကို
ငွေ ပြန်ဝင်တာ က အများကြီး ပိုနေပါတယ်။
ပြည်တွင်း က နေ အပြင် ကို ပြန်ထောက်ပေး ရတာ ၊ ဘယ်သူ မဆို အကြာကြီး မထောက်ရ
ပါဘူး ၊ ကျောင်းနေတဲ့ သူဆိုရင် ၊ ပတ်တိုင်မ်း အလုပ်လေး ရ အောင်ရှာ ၊ ပညာသင်
ထောက်ပံ့ငွေငွေ လျောက်ကြ ၊ ဘဏ်ချေးငွေရှာ ကြ နဲ့ ၊ သူ့ စရိတ် သူ စားနိုင်အောင်
ငွေမာ ကို အများကြီးသုံးဘို့ လိုတာ ကလည်း အစိုးရပါ။ မသုံး တော့ဘဲ ချိုးခြံ နေနိုင်တာ က
လည်း အစိုးရပါ။ အစိုးရ က ဝင်ငွေ မရှိဘဲ ငွေမာ သုံးဘို့ အစီအစဉ် ရှိရင် ငွေဖောင်းပွပြီး
ငွေမာဈေး ထိုးတက်လာပါတယ် ၊ အစိုးရ က ငွေမာ အသုံးမလိုရင် ၊ သူ့ မှာ ရှိတဲ့ ငွေမာ
ကိုပါ ဈေးကွက်ထဲ လှည့်သုံးလာရင် ၊ ငွေမာဈေး ကျလာမှာပါ။
ပြည်တွင်း မှာ သုံးတဲ့ ဗမာငွေ က လှည့်ပါတ် ငွေ ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာ
အစိုးရ ကဘဲ သိပါတယ် ။ ရိုက်ထားတဲ့ ငွေစက်ကူ တန်ဘိုးပေါင်း က ဘယ်လောက်
ညနေ တနေကုန်သွားရင် ‘ရိုက်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ တန်ဘိုး ဘယ်လေက် က ဘဏ်ထဲ မှာရှိတယ်
ကျန်တဲ့ တန်ဘိုး ဘယ်လောက် က လူတွေ လက်ထဲ မှာ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ စာရင်းဇယား က
အစိုးရ ဘဲ သိတာပါ။ အဲ လူတွေ လက်ထဲ ပိုက်ဆံတွေ များနေရင် ၊ ဘယ်လို ရိုက်ပြီး
ပြန်ယူရမယ် ၊ ဘာတွေ ကို တက်ဈေး နဲ့ ထုတ်ရောင်း ပစ်လိုက်မယ် ၊
မြေ တိုက်ခန်း စက်ရုံ ၊ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် ၊ မော်တော်ကားတွေ အသုတ်လိုက် ရောင်းထုတ်ပြီး
ဘယ်လို ပြန်ဆွဲစား ရမယ် ဆိုတာ သူနားလည်ပါတယ်။
ငွေ က အစိုးရ လက်ထဲ များများပြန်ရောက် လာရင် ၊ ဘယ်လိုထိမ်းရ မယ်ဆိုတာ က လဲ
သူ သိပါတယ် ။ ဂျင် ဝိုင်း မှာ ဂျင်ထိုးကြ သလိုပါ။ ငွေကြေးဖောင်းပွ မှု က
ဘယ် ဝိသမ လောဘသား ၊ ဘယ် ကုန်သည် က မှ လုပ်လို့ မရ ပါဘူး။
ငွေကြေး စနစ်ကို လှည့်ပါတ် မောင်းနှင်နိုင်စွမ်း ရှိသူက သာ အကွက်ရွှေ့လို့ ရတာပါ။
အခု ဆို လူတွေ လဲ ၊ ဟို အကွက် အဆင်ပြေနိုး ၊ ကားဈေးကွက် အိုကေ နိုး
ငွေမာ ကိုင်ထားရင် အဆင်ပြေနိုး ၊ စပါး နဲ့ ပဲ ကိုင် လိုက် ရင် အကွက်ကောင်း ရ နိုး နိုး နဲ့
လူ ပင်ပမ်း ငွေ ပင်ပမ်း ဖြစ်နေကြတာ များပါတယ်။
ကိုင်း သဌေးကြီး ၊ ချမ်းသာသမျှ ပိုက်ဆံ စားပွဲ ပေါ် ပုံပြစမ်းပါ ဆိုရင်
ပြ နိုင် ၊ ကိုင်နိုင် တဲ့ သူ နဲ သွားပါဘီ။ ချမ်းသာ သမျှ က စာရင်း အဖြစ်ဘဲ ရှိနေတာ
များ ကုန်ကြပါဘီ ။ အခု ငွေမာဈေးကွက် က တော့ အစိုးရ က ငွေကို ဘုံးဘောလအော
မသုံးရင် ၊ ပြောင်းဘို့ မရှိပါဘူး ။
ငါးထောင်တန် က လဲ ရိုက်ထားတာ ကြာလှပေါ့ ဗျာ ၊ ဟို အရင် ဦးခင်ညွန့် တို့ ရှိ ကတဲက
ရိုက်ပြီးသားတွေပါ ။ ဟို တုံး ကတဲက ထုတ်သုံးလိုက်ရင် ဒေါ်လာဈေး က အခု အချိန် ဆို
ငွေမာဈေး က ငါးထောင်အောက် ဘယ်ရောက်မှာလဲ ခင်ဗျ။ ပြီးခဲ့ တဲ့ ၂ နှစ်ခွဲ လောက် ကတဲက
အစိုးရ က ငွေကြေးပေါ်လစီ ချိန်းလိုက်ပြီး ဘဏ်စာရင်းတွေ ၊ ပို့ ကုန် သွင်းကုန် စာရင်းတွေ
နေ့တိုင်း ၊ ညနေတိုင်း အပ်ဒိတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး သူ က ဘဲ အထက်စီးရအောင် လုပ်လာတာပါ
အခုထိ ငါးထောင်တန် က နိတ်ပတ်လည်အောင် မထုတ်ပေးသေးပါဘူး။
ငါးထောင်တန် ကို ထုတ်လိုက်လို့ အပြင် မှာ ငွေဈေးပြောင်းရင်
ထိုးရောင်းမဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ အမေရိကန် က လည်း ၊
သူ့ အကြောင်း နဲ့ သူ ငွေ လည်အောင် လုပ်နေရ မဲ့ အခြေအနေ
မှာ ကဘာ မှာ အမေရိကန် ငွေ က လည်း တန်ဘိုးချ အောင် ပြန်လုပ်နေရတဲ့ အခြေအနေပါ။
အမေရိကန်ငွေ တန်ဘိုး ကျ မှ အမေရိကန် အနေနဲ့ က ပို့ကုန် တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ် ။
တရုပ်ကြီး ဆီ က နည်းတွေ နဲ့ တရုပ်ကြီး ကို ပြန် ပြိုင်နေရတာပါ။
တရုပ်ကြီး က လည်း သူ့ ငွေလဲနှုန်း ကို ပြန် ပြင်ပေးမဲ့ သဘော မရှိတော့ ၊ သူ့ လိုဘဲ
အမေရိကန် က လိုက်ပြိုင် နေရတော့ ၊ နောက်ထပ် တနှစ် လောက်တော့ ဒေါ်လာဈေး
အားနည်းနေဘို့ များပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ကဘာ့ စီးပွားရေး က လဲ နေ့ ည မနား
တချိန်လုံး အခြေအနေပြောင်း နေလွန်းပ ဗျာ။
ငါးထောင်တန် က လဲ လူတွေ လက် ထဲ သိပ် မတွေ့ ရပါဘူး ၊ ကျွန့်တော် မှာ တောင်
အခု တရွက် မှ မရှိတော့ ပါဘူး ၊ ကိုင် လဲ မကိုင်ချင်တော့ ပါဘူး ။
ဟို တနေ့ ညနေ က ကားမောင်းသွားရင် ဆပ်ပရိုက် ချက် နဲ့ တွေ့ ပါတယ်။
မော်တော် ပီကယ်က ကားလိုင်စင်စာအုပ် ဝှီးတက် နဲ့ ယဉ်မောင်းလိုင်စင် စစ် ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အဆင်သင့်အမြဲထားတော့ အကုန်လုံး ထုတ်ပြနိုင်ပါတယ်။
ပုလိပ် က စာရွက်စာတမ်းတွေ လဲစစ်ပြီးရော အမူအယာ ချက်ချင်းပြောင်းသွားပါတယ်။
ကျွန်တော့ ကို တော် တော် ရိုရို ကျိုးကျိုး ဆက်ဆံပြီး ၊ ဆရာချင်း မိုးမွှန်အောင်
ခေါ်တော့တာပါဘဲ ၊ စာအုပ် ကလေးတွေ ကို တရိုတသေ ပြန်ပေးပြီး ၊
ကား ပြန်ထွက်ခါနီး လမ်းရှင်း ခရာတွေ ဘာတွေ တောင် တွတ်ပေးလိုက်လို့
လုတောင် ဘဝင် အတော်မြင့်သွားပါတယ်။
အင်း ဘာကြောင့် များ ပုလိပ်မင်း က အပိုး ဒီလောက် ကျိုးသွားရပါသလဲ ဆိုတာပါ
စဉ်းစားကြည့်တော့ ငါ့ ကား ကို တော့ ရိုသေစရာ မရှိပါဘူး ၊ ငါ က ဘဲ
ဥပဒိ ရုပ်ကောင်းလွန်းလို့ ‘ဒင်း က လေးစားသွားတာ နေမှာပါ လို့
စိတ်ထဲ အောင်းမေ့ မိပြီး ၊ အတော် ဟုတ်တဲ့ ငါပါလားလို့ ထင်လိုက်မိပါတယ်။
အိမ်ရောက် မှ ၊ ပြန်ကြည့်တော့ ထင်နေခဲ့ မိတာ တွေ က ၊ မှား လှ ပါ လားဗျာ။
ကျွန်တော့် မှာ ငါးထောင်တန် လေး ၊ ၂ ရွက် ရှိတာ ၊ မှား ပြီး သုံးမိ မစိုးလို့
ကားစာအုပ်လေးထဲ ဝှီးတက် နဲ့ အတူ ညှပ်ထား မိတာ ၊ အခု ၊ မရှိတော့ပါလားဗျာ
ဟို ပုလိပ်မင်း ၊ ‘ဒီ ငါးထောင်တန် ၂ ရွက် ကို သူ့ ဘို့ လာဘ် ပေးတယ်
ထင်ပြီး နှိုက်ယူသွား ပါ ပလားဗျာ ၊ ‘ဒါကြောင့်ဒင်း က မတရား ရိုကျိုးနေသကိုးဗျ
နောင်များတော့ တော်ပါဘီ ၊ ငါးထောင် တန် ဆိုရင် မကိုင် ဝန့်တော့ ပါ ဗျား ။
Russian Skyscraper 'Will Ruin Historic City'
St Petersburg is in danger of losing its world heritage status as construction of Europe's tallest sky scraper begins. Russian gas giant Gazprom's behind the project, but opponents hope Vladimir Putin will scrap it. Sky's Amanda Walker reports.
Bullet Proof Boat Takes On Whalers
Environmentalists have unveiled their latest weapon in their fight against Japanese whaling fleets. Ian Woods reports
နာဂစ်ဒေသတွင် စပါးဈေးနှုန်းများ အပြောင်းအလဲဖြစ်
စပါးပေါ်ချိန်ကာတွင် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း စပါးဈေးနှုန်းများ မမှန်ကန်ဖြစ်သည်ဟု လယ်သမားအချို့က ပြောဆိုကြသည်။
ပေါ်ဆန်းမွေးက လေးသိန်း၊ အချွန်အုပ်စုက နှံကားပေါ့ သူက လေးသိန်းတသောင်း၊ ဈေးတွေက ဗြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ အရင်တုန်းက အချောက မြင့်တယ်၊ အကြမ်းက နိမ့်တယ်လေ၊ အခုတော့ ဗြောင်းပြန်ပေါ့။
နာဂစ်ဖြစ်ပြီးကတည်း သုံးပုံတပုံပဲထွက်ပြီး လယ်မလုပ်နိုင်သူမြေကွက်များစွာ လွတ်ကြောင်း လယ်ဧက တသိန်းကျော်ရှိနေသည်အထဲမှ စပါးမှာ နှစ်သိန်းဝန်းကျင်စွာသာ ထွက်ရှိကြောင်း ဒေသခံ လယ်သမားက ပြောသည်။
“ဘိုကလေးမြို့နယ် တနယ်လုံး စိုက်ဧကခန့်မှန်းချက်က တသိန်း ရှစ်သောင်းလောက်ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့အပျက်အစီးတွေနဲ့ မစိုက်နိုင်တဲ့ ကွက်လပ်တွေကျန်တယ်။ စိုက်နိုင်တာဆိုလို့ သုံးသိန်းလောက်ပဲရှိတာ၊ ထွက်နှုန်ုးကျတာပေါ့။”
တိုင်းပြည်၏အောက်ပိုင်းဒေသတွင် ၄၀/ ၆၀ ထိစပါးအထွက်နှုန်းတိုးသော်လည်း နာဂစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် ကျွန်းသာယာတို့ဘက်တွင် ကြွက်များဝင်ဖျက်သဖြင့် ထွက်နှုန်းကျဆင်းနေကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ကျွန်းသာတို့ ရွှေညောင်ကြီးတို့ကျတော့ မထွက်ဘူး၊ သက်ဆိုင်ရာကို ငွေတသိန်းခွဲပေးပြီးကြိုရောင်းရတဲ့သဘောပါ စပါးရောင်းပြီး ပြန်ဆပ်ရတာပေါ့၊ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီဈေးတွေက ကုန်သည်တွေထဲမှာပဲ ရတယ်။ စက်ပိုင်ရှင်များအသင်း ဘာညာပေါ့။ နောက်တခုက ဒေသကုန်သည်ကြီးတွေပေ့ါ ပုလဲပေးတွေ၊ ရွှေပေးတွေ၊ ငွေပေးတွေ၊ စက်ပေးတွေ စတဲ့ ရိက္ခာအထောက်အပံ့ပေးတွေနဲ့ ကြိုပြီးတော့ ယူထားရတာကို။ လယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပုလဲဓါတ်မြေ့သြဇာ၊ စက်မောင်းဆီ၊ စက်မောင်းခ၊ စတဲ့ ငွေကြေးလုပ်အပ်ချက်တွေရှိတယ်လေ ငှားခက။ အဲဒါတွေကို ငွေကြိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ စပါးနဲ့ ချေလိုက်တာက များတာကို။ အဲဒါတော ရလာတဲ့ စပါးတွေကို ထိုးအပ်ရတော့တာပါပဲ။”
ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများသာ စပါးထွက်ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး သာမာန်လယ်သမားက အကျွေးမဆပ်နိုင်ပဲ အခြားစက်များ လက်သိပ်ရောင်းစားပြီး စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းကြရသည်ဟု သူကပြောသည်။
“သိပ်မကြာပါဘူး၊ မတ်လအကုန်လောက်ဆိုရင် ဆန်ပြဿနာတက်မလား မပြောတတ်ဘူး၊ မတရားမှုတွေပေါ်လာ မှာပါ။ အကြွေးမဆပ်နိုင်တဲ့ လယ်သမားတွေအမှုပေါ့။”
အမှိုက်ပစ်လျှင် ဒဏ်ငွေ ကျပ် (၁) သိန်းကောက်မည်ဟု တယက ကြေညာပြန်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ မြို့နယ်တို့တွင် နောက်ဖေးလမ်းကြားသို့ အမှိုက်ပစ်ပါက ဒဏ်ငွေ ကျပ် (၁) သိန်းထိ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (တယက) က ကြေညာလိုက်သည်။
တယက က ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ပထမပတ်တွင် ပုဒ်မ (၁၈၈) ထုတ်ပြန်ကာ လမ်းကြားသို့ အမှိုက်မပစ်ရဟု အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် ဒဏ်ကြေး (၁) သောင်းကျပ် သတ်မှတ်ကောက်ခံခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလတွင် ဒဏ်ကြေး
(၂) သောင်းကျပ်၊ ထို့နောက် (၅) သောင်းကျပ် အသီးသီးသတ်မှတ် ကောက်ခံပြီးနောက် ယခုအခါ ကျပ် (၁) သိန်းအထိ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်ဟု ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တယက ထုတ်ပြန်သည့် တားမြစ်ဥပဒေတွင် မည်သည့်အမှိုက်ဖြစ်စေ တစုံတယောက်က စွန့်ပစ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူး၊ ရယက အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းမကြားပါက အဆိုပါအမှိုက်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးအခန်းတွင် နေထိုင်သူများက ၀ိုင်းကြီးချုပ်စနစ်ဖြင့် အဆိုပါ အမှိုက်ပစ်ခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမည်ဟု ပါရှိသည်။
ဒဏ်ငွေသတ်မှတ်သော်လည်း လိုက်နာသူ နည်းပါးနေသေးသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဒဏ်ငွေတိုးမြှင့်ကောက်ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့သည် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ လာရောက်လည်ပတ်နေသည့် မြို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြို့အင်္ဂါရပ်နှင့် လျော်ညီစေရန် အမှိုက်ပစ်ခြင်းကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေထိုင်သူအများစုကမူ အမှိုက်ပစ်ရန်နေရာသည် လမ်းမပေါ်တွင်သာ ဖြစ်နေသဖြင့် စည်ပင်ကသာ အချိန်မှန် အမှိုက်သိမ်းရန် အဓိကလိုအပ်သည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။
“စည်ပင်က ပြောပါတယ်။ တိုက်ခန်းတွေရဲ့ ရှေ့မျက်နှာစာမှာ အမှိုက်ကို ထားပေးပါ၊ လာ သိမ်းပါ့မယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် မလာတာက များတယ်လေ။ အဲဒီတော့ တယက က ဒဏ်ငွေ ပြစ်ဒဏ် ကောက်ခံတယ်။ ကျနော်တို့က အမှိုက်ကို အချိန်မီလာသိမ်းဖို့ကိုပဲ လိုလားတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့လည်း တိုက်ပေါ်ကနေ လွှင့်ပစ်တာမျိုး ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး” ဟု ပန်းပဲတန်း မြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း (၆) မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများက လမ်းကြားများတွင် အမှိုက်သိမ်းရန်အတွက် တိုက်ခန်းတခန်းလျှင် ကျပ် (၄,၀၀၀-၅,၀၀၀) အထိ ပေးဆောင်ကြရကြောင်းလည်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ယခုနှစ်ပွင့်လင်းရာသီ၏ အကြီးမားဆုံး လောင်းကစားပွဲကို မြ၀တီမြို့ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်ရှိ ဓမ္မရန်အောင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပနေသည်ဟု လောင်းကစားဒိုင်ကြီးတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒီပွဲက မြ၀တီမှာ အကြီးဆုံးပွဲပဲ။ ကစားဝိုင်းက အကြီးအသေးဝိုင်း (၆၀) လောက်ရှိတယ်။ အကောက်ကတော့ ၀ိုင်းကြီး (၁) သိန်း၊ ၀ိုင်းငယ် (၄) သောင်းယူတယ်။ တညကို အကောက် (၁၅) သိန်းလောက်ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုလ (၁၁) ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် လောင်းကစားပွဲကို မြ၀တီခရိုင်အာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး လောင်းကစားပွဲကို ဓမ္မရန်အောင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရန်ပုံငွေပွဲဟု အမည်ခံကာ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
လောင်းကစားဝိုင်းကြီးကြပ်သည့် အ ဖွဲ့ ဝင်တဦးက “အကောက်က ငါတို့ချည်းပဲရတာမဟုတ်ဘူး၊ မြ၀တီက လူကြီးတွေကိုလည်း ခွဲပေးရတယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလည်း လှူရသေးတယ်။ ဒီလိုမှမလုပ်ရင် ဒီနယ်မှာ ဘာမှလှုပ်ရှားမယ် မကြံနဲ့ ပွဲပြီးသွားမယ်” ဟု ပြောသည်။
ပွဲတော်ကာလအတွင်း ဟန်ပြအနေဖြင့် ညစဉ်ကပြသည့် မော်လမြိုင်မှ ဟိန်းချစ်၊ ချစ်ရာဇာ၊ ချစ်ရဲမင်း၊ ချစ်မင်းသူ စသည့်ဇာတ်အဖွဲ့များကိုလည်း ငှားရကြောင်းနှင့် ဒီကေဘီအေမှ သပိတ်ဝင်အိတ်ဝင် မရကြောင်း၊ အဖွဲ့ရန်ပုံငွေအတွက် လာမည့်လအထိ ဆက်လက်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့ဝင်က ပြောသည်။
လောင်းကစားပွဲသို့ ညစဉ် လူထောင်ချီလာရောက် ကစားကြသဖြင့် ရပ်ကွက်တခုလုံး ဆူညံနေကာ လောင်းကစားဝိုင်းတို့တွင် လည်း ထိုးသားများကိုမြူဆွယ်ရန် ပြည့်တန်ဆာများပါရှိပြီး ရပ်ကွက်အတွင်း ဥဒဟိုဝင်ထွက်သွားလာနေမှုကြောင့် မှောင်ရီပျိုးစအချိန်တွင် အမျိုးကောင်းသားသမီးများပင်လျှင် အပြင်မထွက်ရဲကြောင်း၊ မြ၀တီမြို့၏ သီးခြားကမ္ဘာကဲ့သို့ဖြစ်နေသော်လည်း အာဏာပိုင်များက တစုံတရာ အရေးယူမှုမရှိကြောင်း ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
မဲဆောက်မြို့မှ (၃၅) ကီလိုမီတာအကွာရှိ မယ်လမတ်မြို့နယ် ၀မ်းဖာရွာတဖက်ကမ်း မြန်မာဘက်ခြမ်းရှိ စခန်းအနီးတွင် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တဦးက နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လောင်းကစားရုံတခုကို လွန်ခဲ့သည့် တလကျော်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားများ နေ့စဉ်သွားရောက်၍ လောင်းကစားကြသည်ဟု သွားရောက်ခဲ့သူ ထိုင်းလူမျိုးတဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အမျိုးသမီးငယ်များအလိုရှိပြီး လစာကောင်းကောင်းရမည်ဟုဆိုကာ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူ ထိုင်းမြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် စာရွက်များကိုလည်း ဖြန့်ဝေလျှက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကို မီးပေးရန် ညွှန်ကြားထား
လာမည့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကာလ မတိုင်မီ ရန်ကုန်မြို့ကို တတ်နိုင်သမျှ လျှပ်စစ်မီးပေးရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ အင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ရန်ကုန်ကို တတ်နိုင်သမျှ လျှပ်စစ်မီးပေးထားရမယ်ဆိုပြီး နေပြည်တော်ကနေ ကျနော်တို့ကို ညွှန်ကြားလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ရေအားလျှပ်စစ်ကနေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အဝင်နည်းသွားတော့ ဂက်စ်တာဘိုင်တွေ လည်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ ပြန်တင်ပြတယ်။ ဒါနဲ့ နေပြည်တော်က စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်း ဆက်ပြီးညွှန်ကြားလိုက်တယ်။ ရန်ကုန်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဂက်စ်တွေ ပို့ပေးဖို့။ အခု ဂက်စ်တွေ ရောက်လာတော့ ခါတိုင်းနှစ်တွေ ဂက်စ်မရှိလို့ မလည်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဂက်စ်တာဘိုင်တွေကို စမ်းပြီး လည်ပတ်နေတယ်။ ဂက်စ်သာ မှန်မှန်ရနေရင် ရန်ကုန်တတိုင်းလုံး လျှပ်စစ်မီး အပြည့်အဝ မပေးနိုင်သေးတာတောင် အရင်နှစ်တွေကလို ခွဲတမ်းနဲ့ ပေးစရာမလိုတော့ဘူး” ဟု ပြောသည်။
သို့သော် ခြောက်သွေ့ရာသီရောက်လာလေ မီးဆွဲအားများလာလေ ဖြစ်သည့်အတွက် မီးအားမနိုင်ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုမျိုးကို ကြုံရနိုင်သည်ဟု အဆိုပါ အင်ဂျင်နီယာက ပြောသည်။
“စစ်အစိုးရက လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလအတွင်း ရန်ကုန်မှာ မီးမလာဘဲ ပြည်သူတွေ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြမှာကို မလိုလားဘူး။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် လျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်ဖို့ ဂက်စ်ရလာအောင် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် နှစ်စဉ် သြဂုတ်လ၌ လျှပ်စစ်မီး မှန်မှန်ရလေ့ရှိပြီး ခြောက်သွေ့ရာသီ နိုဝင်ဘာလဆန်းခန့်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အဝင်နည်းသွားသောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးကို ခွဲတမ်းဖြင့်သာ ရလေ့ရှိသည်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင်မူ နေပြည်တော်၌ သုံးစွဲသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပမာဏ များလာခြင်း၊ ရန်ကုန်ရှိ ဂက်စ်တာဘိုင်များ လည်ပတ်ရန် ဂက်စ် ပံ့ပိုးမပေးခြင်းတို့ကြောင့် မိုးတွင်း၌ပင်လျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှု လျော့နည်းခဲ့သည်။
နအဖစစ်အစိုးရသည် လောလောဆယ် ဂက်စ်တာဘိုင်များ လည်နိုင်ရေးအတွက် ဂက်စ်များ ပို့လွှတ်ပေးရုံမက လာမည့်နှစ်၌ ရန်ကုန်တွင် ဂက်စ်လုံလုံလောက်လောက် ရရှိနိုင်ရန် မုတ္တမ - ရန်ကုန် (၂၄) လက်မ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းအသစ်ကို သွယ်တန်းလျက်ရှိပြီး အဆိုပါပိုက်လိုင်းကို လာမည့် ၂ဝ၁ဝ မေလ၌ အပြီးသွယ်တန်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ အထက်မြန်မာပြည်ဘက်တွင်လည်း အပြီးမသတ်နိုင်သေးသည့် ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် စက်တလုံးကို စမ်းသပ်လည်ပတ်ရန် စတင်တည်ဆောက်နေပြီး အဆိုပါစက် လည်ပတ်ရေးအတွက် ဒုဌဝတီမြစ်ရေကိုပိတ်ပြီး ဆည်ရေများ စတင်စုဆောင်းနေပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ နှစ်မှစ၍ စုစုပေါင်း စက်တပ်ဆင်အား မီဂါဝပ် (၁၆ဝဝ) ကျော်သာရှိသည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုပမာဏမှာလည်း ကီလိုဝပ် သန်းပေါင်း (၆,ဝဝဝ) ကျော်မှ မတိုးတက်ဘဲရှိနေသည်မှာ ယခုတိုင်ဖြစ်ကြောင်း အငြိမ်းစား တိုင်းလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဟောင်းတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ရန်ကုန်အပါအ၀င် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာတော့ လျှပ်စစ်မီတာတွေ တိုးမြှင့်ရောင်းချခဲ့လို့ ၀င်ငွေကျပ် (၃၈) ဘီလီယံကနေ (၁၆၀) ဘီလီယံလောက်အထိ (၅) ဆနီးပါး တိုးလာပေမယ့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှုအခြေအနေကတော့ တနေ့တခြား ဆိုးနေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအဖွဲ့သည် ဂက်စ်ရရှိနိုင်သမျှဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးနေသောကြောင့် ခွဲတမ်းစနစ် ပြန်လည်ကျင့်သုံးခြင်း မရှိသော်လည်း မီးအား မလုံလောက်သဖြင့် မကြာခဏ မီးပြတ်တောက်မှုများ ရှိနေကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ပြည်ပပို့ကုန်ငွေ (Export Earning) ရရှိထားသူတိုင်းကို စီးပွားရေးမူဝါဒရေးရာကောင်စီက မည့်သည့်ကုန်ပစ္စည်းမဆို ပြည်ပမှ လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့်ပြုရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒီဇယ်ဆီတွေကို ကော်မတီဖွဲ့ပြီး တင်သွင်းနေကြရာက ပို့ကုန်ဝင်ငွေ ရှိသူတိုင်း တင်သွင်းခွင့်ရတာကို အတိအကျ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် အခုတခါ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အဲလိုပဲ တင်သွင်းခွင့်ပေးဖို့ နေပြည်တော်က စီစဉ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလအတွင်း ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား လောင်စာဒီဇယ်ဆီ လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့် ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်က ပြောသည်။
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ရတနာများကို ပြည်ပက တင်သွင်းခွင့်ပြုတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “နိုင်ငံခြားငွေရှိတဲ့သူတွေကို ဒီဇယ်တင်သွင်းခွင့်ပြုပြီးနောက် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရတာ လွတ်လပ်ခွင့်ရလာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း အဲဒီလိုပဲ တင်သွင်းခွင့်ကို ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်၊ လောလောဆယ်တော့ သွင်းမယ့်သူတွေ မပေါ်လာသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဒီဇယ်တင်သွင်းခွင့်ကို စိတ်ဝင်စားကြသော်လည်း သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပတ်သက်သော ရွှေနှင့် အခြားရတနာများကို စိတ်မ၀င်စားကြကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းဝင်တဦးက ပြောသည်။
ရတနာကုန်သည်တဦးကမူ “ရွှေကို ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်ပက တင်သွင်းရလောက်အောင်ထိ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်မရှိဘူး။ တခုတော့ ပြောလို့ရတယ်။ ပြည်ပက ဒီဇိုင်းဆန်းတွေကို တင်သွင်း ရောင်းချတာမျိုးပေါ့၊ ဒါလောက်တော့ ရမယ်။ အရေးကြီးတာက မြန်မာက ကျောက်စိမ်းတို့လို တွင်းထွက်တွေကိုပဲ ပြည်ပပို့ကုန်အနေနဲ့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့၊ ခွင့်ပြုနိုင်ဖို့ကိုတော့ အားလုံးက လိုလားကြတယ်။ အကောက်ခွန် သက်သက်သာသာနဲ့ပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာလူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြည်ပမှ ကားတင်သွင်းခွင့်ကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရန် မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြကြောင်း ရန်ကုန်မှ နာမည်ကြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “မြန်မာပြည်ကလူတွေ ဇိမ်ခံကားတွေကို ဈေးအဆမတန်ပေး စီးနေရတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို ကျမတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက တင်သွင်းချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက တင်သွင်းခွင့်မပေးဘူး။ ဒါက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့လည်း ဆိုင်နေတာပေါ့လေ။ Export Earning ရှိတဲ့သူတွေကို ဒီဇယ်တင်သွင်းခွင့် ပြုတယ်ဆိုတာသိရလို့ကြိုဆိုပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အရာအားလုံးကို ဖွင့်ပေးစေလိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အရောင်းဝန်ထမ်းများ၏ တင်ပြချက် စည်ပင်ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် တလွဲစီဖြစ်
ရန်ကုန်မြို့ စည်ပင်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ စင်တာနှင့်ကုန်တိုက်များမှ အရောင်းဝန်ထမ်းတို့အား အလုပ်ရှင်များက ရက်သတ္တ
(၁) ပတ်လျှင် (၄၈) နာရီထက် ပိုမိုစေခိုင်းခြင်း မရှိရဟူသည့် မြို့တော်ဝန်၏အမိန့်သည် အရောင်းဝန်ထမ်းတို့၏ လိုလားချက်များနှင့် တခြားစီ ကွဲပြားနေကြောင်း ဝန်ထမ်းများက ပြောသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ် ယုဇနစင်တာမှ အရောင်းဝန်ထမ်းတဦးက “ကျမတို့တင်ပြထားတာက စင်တာကြီးတွေနဲ့ ကုန်တိုက်တွေက အရောင်းဝန်ထမ်းတွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက တူညီတဲ့ အားလပ်ရက် တရားဝင် သတ်မှတ်ပေးဖို့ပါ။ ဥပမာ ရန်ကုန်မြို့က အရောင်းဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ အလုပ်နားရက်အဖြစ် တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးလိုက်။ စင်တာကို မပိတ်ချင်ရင် နေ့တိုင်းဖွင့်လည်း ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအားလပ်ရက်မှာ အလုပ်ဆင်းရရင် အချိန်ပိုကြေး အထူးလုပ်အားခ အနေနဲ့ ပေးရမယ်။ ကျမတို့က အဲဒီလို ဖြစ်စေချင်တာ။ အမိန့်ထွက်လာတော့ အလုပ်ရှင်နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ပြဿနာဖြစ်အောင် တွန်းသလိုဖြစ်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။
အရောင်းစင်တာနှင့် ကုန်တိုက်တွင် ပိတ်ရက်မရှိ အလုပ်လုပ်နေကြရသည့် ဝန်ထမ်းများက အလုပ်နားရက် တပြေးညီ သတ်မှတ်ပေးရန် အလုပ်ရှင်နှင့် အာဏာပိုင်တို့ထံ ယခုလဆန်းပိုင်းက တင်ပြခဲ့ပြီးသည့်နောက် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်းက တပတ်လျှင် (၄၈) နာရီထက် ခိုင်းစေလျှင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသို့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သတ်မှတ်ချိန်ထက် ခိုင်းစေလျှင် ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းနေ၍ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အရောင်းဆိုင်များတွင် လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က စာကပ်ထားသော်လည်း မည်ကဲ့သို့ အရေးယူပေးမည်၊ မည်မျှ အာမခံချက်ရှိမည် စသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမူ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိချေ။
“နေ့စား အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လခစားအလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ် (၁) ပတ်မှာ တရက်တော့ အနားပေးရမယ်ဆိုတာ အလုပ်ရှင်တွေသိအောင် ဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာအောင် ဒီလိုစာထုတ်တာ။ တိုင်ကြားလို့ ဥပဒေအရ အရေးယူတဲ့ကိစ္စကို စည်ပင်သာယာအနေနဲ့ ဘာမှမလုပ်ပေးပါဘူး။ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုပဲ လျှောက်ရမှာ။ စည်ပင်အနေနဲ့က သိဖို့အတွက် စာကပ်ပေးတာ” ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်း ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ယနေ့ထုတ်7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုချက်သည် လက်တွေ့အခြေအနေတွင် မလွယ်ကူကြောင်းနှင့် လွဲမှားစွာ ချမှတ်လိုက်သည့် အမိန့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ထမ်းများက ဆိုသည်။
“အခု ကြေညာချက်အတိုင်း သွားတိုင်ရရင် အရောင်းစင်တာတိုင်းက ဝန်ထမ်းတွေ သွားတိုင်ရမယ်လေ။ အရောင်းစင်တာတိုင်းက တနေ့ကို (၁၀) နာရီအထိ ခိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာပဲ။ သွားတိုင်ရင် အချိန်ပိုလုပ်ခတို့၊ လျော်ကြေးတို့ ရဖို့ မသေချာပေမယ့် အလုပ်ဖြုတ်မှာတော့ သေချာတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကြေညာချက်က လက်တွေ့မှာ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားအကြား ပြဿနာ ဖန်တီးတာပဲ” ဟု မင်္ဂလာဈေး အထည်ဆိုင်တဆိုင်မှ အရောင်းဝန်ထမ်း မသက်အေးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယုဇနစင်တာ မန်နေဂျာတဦးက ထိုကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ယုဇနဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်လုပ်ချိန် တရက်လျှင် (၈) နာရီသာ ထားရှိကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သော်လည်း အရောင်းဝန်ထမ်းများကမူ မနက်ပိုင်း (၉) နာရီမှ (၁၂) နာရီ အထိ၊ ညနေပိုင်း (၁) နာရီမှ ည (၈) နာရီအထိ တရက်လျှင် (၁၀) နာရီတိတိ အလုပ်လုပ်ကြရကြောင်း ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ အရောင်းစင်တာနှင့် ကုန်တိုက်ဝန်ထမ်းတို့သည် တရက်လျှင် အနည်းဆုံး (၉) နာရီ အလုပ်လုပ်ကြရပြီး လစာမှာမူ ကျပ် (၃၅,၀၀၀) မှ (၁) သိန်းဝန်းကျင်ခန့်သာ ခံစားခွင့်ရှိကြသည်။ အရောင်းစင်တာများက ဝန်ထမ်းတို့အား (၁) ပတ်လျှင် အလှည့်ကျ တရက်နားစနစ်ဖြင့် နားစေပြီး ပိတ်ရက်မရှိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေကြောင်း သိရသည်။
မသက်အေးက “ကြေညာချက်အတိုင်းဆိုရင် တရက်ကို (၈) နာရီ၊ (၁) ပတ်မှာ (၆) ရက် အလုပ်လုပ်ပေါ့။ သက်ဆိုင်ရာက ဒီ့ထက် ပိုသတ်မှတ်သင့်တာက အဲဒီထက် ပိုတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် အချိန်ပိုကြေး ပေးဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကြေညာချက်မှာ အဲဒါမပါဘဲ သွားတိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြီး အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ အပေါ်ယံလောက်ပဲ ချမှတ်လိုက်တာ။ ပိုတဲ့အလုပ်ချိန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ အလုပ်အားရက် တပြေးညီ သတ်မှတ်ဖို့ကြတော့ မချမှတ်ပေးဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူက သွားတိုင်ရဲမလဲ" ဟု ပြောသည်။
အရက်ကြော်ငြာ ပိတ်ပင်ခြင်းကြောင့် ပုံနှိပ်မီဒီယာ ရပ်တည်ရေး ထိခိုက်နိုင်
ပြည်တွင်း ပုံနှိပ်မီဒီယာများအား အရက်ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းခွင့် တားမြစ်လိုက်ပါက မီဒီယာလုပ်ငန်း ဆက်လက်ရပ်တည်ရေးအတွက် အခက်အခဲများစွာဖြင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း စာနယ်ဇင်းထုတ်ဝေ လုပ်ကိုင်သူများက ပြောသည်။
လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်း လက်ထောက်အယ်ဒီတာတဦးက “မီဒီယာတွေကို စစ်အစိုးရက ရန်သူလိုသဘောထားပြီး အရက်ကုမ္ပဏီတွေကိုတော့ ဒိုနာ (အလှူရှင်) တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေလို ဆက်ဆံနေတာကိုက မှားနေတာ။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် မီဒီယာတွေ အထိနာမှန်းသိလို့ လုပ်တာဖြစ်တယ်။ မီဒီယာတွေ ရှေ့ဆက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲ အများကြီးဖြစ်လာမယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
လူငယ်တို့အား မှားယွင်းစေသည့် အသိအမြင်များ မရရှိစေရန်ဟုဆိုကာ လာမည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်မှစ၍ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာအုပ် စသည့် ပုံနှိပ်မီဒီယာများတွင် အရက်ကြော်ငြာခွင့်ကို ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားထားသည်။ ထိုသို့တားမြစ်လိုက်သည့် အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိကြောင်း ခံဝန်ချက် လက်မှတ်ထိုးကာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဟု အဆိုပါလက်ထောက် အယ်ဒီတာက ပြောသည်။
ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအားလုံးတွင် အရက်ကြော်ငြာ ပိတ်ပင်သည်ဆိုသော်လည်း အရက်ကြော်ငြာ ပြက္ခဒိန်၊ ပိုစတာများကိုမူ ဆက်လက် ခွင့်ပြုထား၍ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက မီဒီယာလုပ်ငန်းကိုသာ ဖိနှိပ်ချင်၍ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်ခသည် ၎င်းဂျာနယ်၏ ရောင်းရစောင်ရေအပေါ် မူတည်၍ ပေးဆောင်ကြခြင်းဖြစ်၍ ယင်းကဲ့သို့ ပိတ်လိုက်လျှင် ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲ ပြေလည်ရန် ဂျာနယ်ဈေးနှုန်း မြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် စောင်ရေ ထပ်မံလျော့ချရမည့် အခြေအနေ ရှိနေကြောင်း အပတ်စဉ်ထုတ် ပြည်တွင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကြော်ငြာတွေထဲမှာ ဆေးဝါးတွေ၊ အလှကုန်၊ အစားအစာ စတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာရယ်၊ အရက်ကြော်ငြာရယ် (၂) မျိုးပဲ ရှိတယ်။ ဒီထဲမှာ ဝင်ငွေအများဆုံး ရနိုင်တာ အရက်ကြော်ငြာပဲ။ ဒါကို ထည့်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုရင် ဂျာနယ်တဝက်လောက် ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ အခု ကျနော်တို့ဂျာနယ်ရဲ့ အပတ်စဉ်ရောင်းအားက (၁) သောင်းကျော်ပဲ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ဂျာနယ်လို ရောင်းအားမရှိတဲ့ဂျာနယ်တွေ ဆက်ရပ်တည်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ ဂျာနယ်ဈေးနှုန်း ဆက်မြှင့်မလား ဒါမှမဟုတ် စောင်ရေ ထပ်လျော့မလား ဒါပဲရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပြည်တွင်းထုတ်ဂျာနယ်တို့၏ ရပ်တည်ရေးသည် ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၌ (၃၀-၅၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ မှီခိုနေကြရပြီး ၎င်းတို့အနက် အရက်ကြော်ငြာကို အားထားနေကြရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဂျာနယ်အယ်ဒီတာက “အခုပိတ်လိုက်တာက တလွဲစီ ဖြစ်နေတယ်။ အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ တကယ်လုပ်သင့်တာက လူငယ်တွေရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် လုပ်ချင်ရင် အရက်ထုတ်လုပ်တာကို ကန့်သတ်လိုက်ပေါ့။ ပြည်တွင်းမှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အရက်ချက်စက်ရုံ (၂၀၀) ကျော်ရှိတယ်။ အဲဒီဘက်အပိုင်းမှာ စံနှုန်းစစ်ဆေးတာတောင် မလုပ်ဘဲ ထုတ်ခွင့်ပါမစ်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူပေးပြီး အားကစားပွဲတွေမှာ စပွန်ဆာလုပ်ခိုင်းတာက လူငယ်တွေရဲ့ မြင်ကွင်းမှာ အဓိက ပိုဖြစ်တယ်။ ဒါကို ပိတ်သင့်တာ” ဟု ပြောကြားသည်။
အရက်လုပ်ငန်းရှင်တို့အနေဖြင့် ပုံနှိပ်မီဒီယာတွင် ၎င်းတို့ထုတ်ကုန်ကြော်ငြာခွင့် ပိတ်လိုက်သည့်အပေါ် တစုံတရာ ထိခိုက်နစ်နာစေမှု ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ကြော်ငြာလမ်းကြောင်းအသစ်အနေဖြင့် စင်ပေါ်ဖျော်ဖြေရေးများ ပြုလုပ်ကာ ဗီစီဒီ သီချင်းခွေထုတ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ တံဆိပ်ကို အပြည့်အဝ ကြော်ငြာနိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် စတင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အယ်ဒီတာက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ထုတ် ဂျာနယ်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ရထားသူ (၂၀၀) ခန့်ရှိကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန စာရင်းဇယားအရ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဆေးလိပ်နှင့် အရက်ကြော်ငြာဘီလ်ဘုတ်ကြီးများ တင်ခြင်းကို ၂၀၀၆ ခု ဒီဇင်ဘာလတွင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တို့က စတင်တားမြစ်ခဲ့သည်။
ရခိုင်ဒေသ ရေအောက် ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကို စင်္ကာပူနှ...
ခွဲစိတ်ခံပြီး သေဆုံးခဲ့သည့် ကျောင်းသူလေးကိစ္စ စုံစမ...
အီရန်မှာ ယူရေနီယံ သန့်စင်ရေးစက်ရုံ ၁၀ ခု ထပ်ဆောက်ဖ...
ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာပြည့်တန်ဆာအချို့ AIDS ရောဂါကြော...
မြန်မာ့ကမ်းလွန်ရေနံ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စင်ကာပူကုမ...
မြန်မာမြင်း ၆ ကောင် နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်များတွင် ယှဉ်...
ဖိလစ်ပိုင် ငါးဖမ်းသမား ၁၄ ဦး အိမ်ပြန်နိုင်ရေး သံတ...
မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အချို့ မူးယစ်ဆေးေ...
မော်လမြိုင် နှစ်ထပ်ဈေးမှ အမြတ်ငွေ သိန်းပေါင်း သိန...
ရန်ကုန်အဆင့်မြင့် အရောင်းစင်တာများဈေးပိတ်ရက် စတင်...
A whistleblower Web site has posted what it says i...
အမှိုက်ပစ်လျှင် ဒဏ်ငွေ ကျပ် (၁) သိန်းကောက်မည်ဟု တယက...
အရက်ကြော်ငြာ ပိတ်ပင်ခြင်းကြောင့် ပုံနှိပ်မီဒီယာ ရပ...
ကိုးကန့် ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီများကို နာမည်ပျက် စာရင်း...
ချင်းမိုင်နေ မြန်မာ အလုပ်သမားများ အခမဲ့ ဆေးကုသခွင်...
နာဂစ်ဒုက္ခသည်များ အကူအညီ လိုအပ်နေဆဲ Thursday, 26 ...
ဗီယက်နမ်က မြန်မာတွင် ပိုမို ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်
သမ္မတ အိုဘားမား ရှေ့နှစ် ၂၀၁၀ တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချ...
ကျေးဇူးတော်နေ့ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်မှာ ကျင်းပ
ရွှေတွင်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီး ဒေသခံလူထု က...
ရန်ကုန်တွင် ဆိုင်ကယ် လုံးဝစီးနင်းခွင့်မပြုကြောင်း ...
ဆန်စပါး အထူးပြုကုမ္ပဏီများ ပြည်ပဈေးကွက်ရှာနေရ
တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ရောင်းစားခံရသည့် ကချင်လူငယ်ယော...
ယနေ့ခေတ် မြန်မာ အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်ပြုသူ နည်း...
ရွှေပြည်နန်း သနပ်ခါး”ကို ဖိလစ်ပိုင်က ဆုချီးမြှင့်
ထိုင်းနိုင်ငံရေး ဂယက်ကြောင့် ချင်းမိုင် လုံခြုံရေး...
WiFi သုံးစွဲနိုင်မည့် နေရာများတွင် ၀က်ဘ်ဆိုက် ခြော...
အခုလာမယ်.တော်ကြာလာမယ.်လာချင်မှလာမယ် ရေ၊မီး အခက်အခဲ...
မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ ငွေကြေး...
ငဝန်မြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်ခဲ့သည့် နေမျိုးထွန်းသင်္ဘောမှ...
မန္တလေးဘူတာရုံတွင် စစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းနေ
နိုဝင်ဘာ(၁၀) ရက်တွင် ခရီးသည်တင် နှစ်ထပ်သင်္ဘော ပြစ်ခ...
ရန်ကုန် ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်များတွင် မြွေအန္တရာယ် စို...
ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် လည်ပတ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဒသခံ...
တရုတ် ကျောက်မီးသွေးမိုင်း ပေါက်ကွဲမှု ၉၂ ဦး သေဆုံး...
Children: 'Mandela hero of the decade'
UN Cares က မြန်မာ့ HIV/ AIDS အရေး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး...
မြ၀တီ စီးပွားရေးဇုန် ညွှန်ကြားရေးမှူး လာဘ်စားမှုဖြင့်...
၂၀၁၀ အမီ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ပင်နိုင်ဟု အိုင...
အစိုးရပိုင် သားရေ ပစ္စည်းစက်ရုံ မီးလောင်
ရတနာပုံအမှား လူထုအကြား ရေပန်းစား
မြန်မာလိဂ် ၃ နှစ် အခွန်ကင်းလွတ်
မြန်မာပြည်မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ကားBurma VJ ၂၀၀၉ ခုန...
ရခိုင်ပြည်နယ် စိုင်းဒင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသုံ...
Global Fund အဖွဲ့က မြန်မာကို ပြန်လည် အကူအညီပေးမည်
မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ကြံ့ဖွံ့အာဏာပိုင်ကို ...
အစိုးရထုတ် သတင်းစာ (၂) စောင်မှ အယ်ဒီတာအဖွဲ့များ နေ...
ကျပ် (၅) ထောင်တန်များ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွက် လျာထား
အခွန်ဦးစီးဌာန လာဘ်စားငွေ တနှစ် ကျပ်ဘီလီယံ (၂ဝဝ)ေ...
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆေ...
စစ်အစိုးရက FACE BOOK (ဖေ့ဘွတ်)ကို ပိတ်လိုက်ပြန်